10 Matanho: Maitiro Ekugadzira Yakabudirira Nharembo Strategy yeBhizinesi? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
bhizinesi centric nharembozha, Mobile Applications, Mobile Apps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Matanho gumi: Maitiro Ekuvandudza Anobudirira Nhare mbozha Bhizinesi?
Yenhare mbozhanhare inzira yekuisa nharembozha mune yako yakazara yemakambani zano. Zvinoenderana neshumo yeCMS, avhareji smartphone shanduko huwandu hwakwira makumi matanhatu neshanu zvichienzaniswa neiyo yedesktops. Izvi zvinogadzira zano renhare rakanyanya kukosha kumabhizinesi. Iine makumi masere muzana evashandisi veinternet pamafoni efoni, ndiyo nguva apo mamaneja anofanira kutanga kutarisa kuvapo kwenhare se "inofanirwa" kune bhizinesi ravo.
Kuvandudza zano renhare kubva pakutanga kunotora nguva, kutsvagisa uye nzira yekuunza zvibereko zvine zvibereko. Zano rakanaka rinofanira kuenderana nemaonero ekambani, shandisa vashandisi, tanga kutenga chiito, kusiyanisa iyo mhando kubva kune vanokwikwidza uye inofanirwa kuwira mukati mebhajeti. Asi nzira yekukudziridza mbozhanhare bhizinesi rinotarisana neese makuru matambudziko?
Unoda kuziva maazvino hacks kuti yako nharembozha kushambadzira irongwe? Tora eBook yedu yemahara:
Nzira Yekukudziridza Inobudirira Bhizinesi Bhizinesi Striki mumatanho gumi?
Kuti ikubatsire kukudziridza nhare mbozha yakanangana nekuunza mhedzisiro kune rako bhizinesi takarongedza nzira gumi nzira yekuunza purofiti kune nhare:
1. Simbisa Sangano Rakazara reKambani:
Sangano rekambani yako rese rinosanganisira chako chinangwa, chiono, zvinangwa, uye zvinangwa. Funga izvi seyakareba nzira, iwe unoda yako app kuti uunze bhizinesi kukambani yako uye kuti zviite izvo zvakakosha kuti ugadzire iyo app inogona kubatsira kwenguva refu. Iwe unofanirwa kuziva kuti chirongwa chinobatsira sei makore mashanu pasi pemugwagwa wekambani yako. Kuwedzera kukosha kumutengi wako ita shuwa kuti yako yekupedzisira chinangwa chinangwa chinosvika kune chakanangwa mushandisi weapp.
Read More: Zvinodhura zvakadii kugadzira nharembozha?
2. Ziva Mushandisi wako:
Vashandisi veapp vanogona kusiyana kusvika padanho rakakura. Izvo zvakakosha kusiyanisa tarisiro vashandisi veiyo app kubva kune zvakasiyana. Vashandisi vako vanogona kusiyaniswa nehunhu, zera, mabhizinesi kana vatengi etc. App yakanaka inotarisana nevashandisi uye inoshandisa zvakakodzera zvakafanana. Iko kukanganisa kwakajairika kunoitwa apa kufungidzira kuravira kwemushandisi uye zvaunofarira uye kuita sarudzo dzakakosha pane zvekufungidzira. Apa ndipo panowanikwa munhu. Iwe unofanirwa kugadzira manas akasiyana evashandisi vakasiyana uye woisa pekutanga zvinoenderana.
Kuverenga Kunonakidza: 10 akakosha metric kuyera mushandisi kubatanidzwa pane nhare
3. SWOT Kuongorora:
Kuziva nharaunda yebhizinesi kunounza nzwisiso huru kune vanoita sarudzo. Ndeipi nzira iri nani yekuongorora nharaunda yebhizinesi iyo SWOT kuongorora. SWOT inomirira Simba, Kushaya simba, Mukana, uye Tyisidziro. Simba uye kushaya simba zvinhu zvemukati senge kuyerera kwemari, dziva rekushandisa, hunyanzvi hwe Developers nezvimwewo Kunyange mukana uye kutyisidzira zviri zvinhu zvekunze zvakaita semakwikwi, kudiwa etc. Wongorora zviwanikwa zvaunazvo - mari, nguva, vanhu uye nemashandisiro aunozviita.
Read More: 7 Akakosha Matipi Ekutevera iyo ROI yeMobile App
Zvitoro zveApp zvakazara zvakapenga. Kana iwe usingakwanise kuzvitsauranisa iwe haugone kumira mukana kupikisana nevakwikwidzi vako. Iwe unofanirwa kuita tsvagiridzo yakakodzera pane ese maapplication aripo nechinangwa chimwe chete seako. Nenzira iyi iwe uchazoziva zvauri chaizvo kupokana. Maonero akakosha aunoda kunyora ndeaya:
Izvo mukwikwidzi wangu ari kuita zvakanaka?
Ndezvipi zvikanganiso zvevandinokwikwidza?
Chii chavasiri kuita zvachose?
Read More: Matanho gumi Ekugadzira Yakabudirira Mobile App
5. Tsanangura Pitch yako:
Tevere, iwe unoita kukanda. Tsanangura zvakajeka kuti chii chako app. Icho chinogara chiri icho chinhu cheapp chinobata ziso. Semuenzaniso, kana iri kofi, iri StarBucks, kana bhaisikopo rayo uye matikiti evaraidzo iri Ticketmaster, ndozvazviri nyore. Iwe unofanirwa kumisikidza yako app seye kuenda-kune-nzvimbo kune yako sphere. Kutanga chiito iwe unofanirwa kupa chikonzero chinogombedzera chekushandisa iyo app. Iyo nharembozha yakasiyana zvakanyanya newebhusaiti. Paunotarisira kuti mumwe munhu atore app yako, urikukumbira kuti vakupe iyo musha dzenhare dzavo. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuita yega yega download kuverenga. Starbucks inorerutsa ruzivo rwekutenga nekubhadhara zviri nyore kubva kunhare uye inowedzera mapoinzi ekuvimbika kuunza vatengi vanodzoka. Kanganiso yakajairika ndeyekufunga nhare senge chiteshi pane yekubata. Seye yekubata nhare inofambisa kudyidzana uye kutenga kwechigadzirwa.
Read More: Ungakwidze Sei Mari YeMobile App?
Sarudza mhando yeapp yaunoda:
Zvino zvawaita kuti pfungwa yako ijekeswe uye ipfupi inguva yekuronga kuvandudza. Zvichienderana nezvinodiwa nevateereri vako zvaunogona kusarudza pakati pechizvarwa kana yehybrid app. Yekuzvarwa Anwendung inotsigira chete chikuva saka iwe unozoda zvakasiyana app kune yega yega chikuva. Pane rimwe divi, masystem mapurogiramu kushanda zvakasiyana Mapuratifomu zvakafanana. Asi masystem mapurogiramu inosanganisira mari shoma uye kudzikisira hunhu hwevashandisi. Zvakare, kana vateereri vako vachinyanya kushandisa chikuva chimwe chete saka zvinokurudzirwa kuti uende kune rwekuzvarwa app sezvo ivo vari kukurumidza uye vasinganyanye kubata bugs.
Read More: 10 Mobile App Kuvandudza Maitiro mu2018
Sarudza maitiro ako ekuvandudza maitiro.
Chinhu chinotevera chinouya munzira yekuvandudza maitiro ekuvandudza. Iwe unogona kuita kuti yako app igadziriswe uchishandisa chero Agile kana Waterfall nzira. Mukuvandudzika kweMapopoma, iwe unosarudza parameter yekusimudzira uye wotanga kusimudzira muchimiro chedanho nedanho maitiro. Ndichiri mu Agile maitiro basa rinoitwa panguva imwe chete pazvikamu zvakasiyana zveapp. Zvikamu zvose zvinoshanda pamwe chete uye zvinotsigirana. Ivo vanobatsirwa neAgile pamusoro peWaterfall ndeyekuti kana paine shanduko, Developers hatifanire kudzokera padariro uye kudzoka zvakare nokudaro kwete kudzokorora muitiro wose.
Read More: 10 Dzakanyanya Njodzi kune Mobile App Security
8.Kupi kwaungaisa budiriro:
Kana iwe uine timu yeIT yakagadzirira kana uine ruzivo uye zviwanikwa zvekuvaka yako wega timu kubva pakutanga saka unogona kusarudza kugadzira yako app mukati-mumba. Asi kana zvisiri saka zvinoita zvine musoro kuburitsa kunze kuvandudza kweApp. Iyo yakawanda nguva uye zviwanikwa zvinopinda mukugadzira yakanaka app uye kuvaka timu zvinongokubhadharira iwe yakawanda pamusoro. Iwe unogona kugara uchivandudza yako yemukati-timu kana iwe wagadzirira kukwirisa bhizinesi rako. Kune vekutanga-nguva vanamuzvinabhizimusi, zviri nyore kuburitsa kunze kwekusimudzira pane kuita zvese ivo vega.
9. Sarudza nzira yekuenda kumusika:
Iwe unofanirwa kusarudza yako musika nzira usati watanga app yako. Mibvunzo yakaita seChii Mapuratifomu kunanga? Maitiro ekufambisa USP yako uye Maitiro ekuwana traction zvese zvakakosha kufunga. Kuita kuti app yako ionekwe, unogona kukwirisa zviziviso zveapp uye mabhena ads. Kushandisa makuponi uye maapplication chaiwo zvinopihwa zvinogona kubatsirawo kana zvichishanda kubhizinesi rako. Nzira yako yemusika haina kukwana pasina chinangwa uye nzira dzekuyera nayo. Zvishandiso zvako pano zvinosanganisira app analytics uye chinangwa chinogona kunge chiri nhamba yekurodha, kupindirana kwevashandisi, kutengesa nezvimwe.
Hechino chakatsanangurwa gwara rekuti mira-kunze mumushamba weapp nemusika weapp
10. Ndedzipi Dzidzo Yekushandisa yaunoshandisa:
Kunyangwe isu tichiedza zvakadii, panogara paine iyo imwe bhagi iyo inotitsika isu pakupedzisira. Iyo bhagi rimwe rinoba zvese zvidhina. Kunyangwe pasina zvakawanda zvingaitwe kubvisa zvachose mukana weizvi zvichiitika, mumwe anogona zvechokwadi kuyedza. Iwo mabasa uye mabasa echikwata chekuyedza anoda kutsanangurwa zvakajeka. Maumbirwo ehurongwa hwekuyedza uye masystem anoshanda, uye shanduro dzinoda kuyedzwa dzinogara dzakafanana. Chii chinoshanduka kubva pakuburitswa kune chimwe chichava zviitiko zvekuyedza uye nzira yezvinoreva 'kupasa' kana 'kutadza' kune yakatarwa mamiriro.
Saka chii chinotevera? Ngatitorei yako nharembozha mukuita:
zhinji matambudziko vakatarisana nekuda kwekushaikwa kwezvishandiso mune zvese bhajeti rekushandisa uye vashandi izvo zvinotungamira kunonoka mukugadzirisa maapplication pamwe nekunzwisisa zvinodiwa nevatengi. Kugadzira rakabudirira mobile zano harisi basa riri nyore asi kana ukarironga nemazvo unogona kubudirira. Paunenge uchinge wapedza netsvagiridzo, unogona kutanga kugadzira uye apa ndipo panouya hunyanzvi hwedu. Kana iwe uchida kuita kuti yako mobile strategy ifambe, saka wasvika panzvimbo chaipo. Isu tiri NewGenApps dzidzira mu kugadzira nharembozha izvo zvinoita mucherechedzo mumisika yeapp. Kana iwe uine zano rinogombedzera, iwe unoda kuona uchibudirira - Taura nesu